Date My Pet » Online Dating Kuwana You Down?
Imi munoziva kuti hazvisi kana uchangobva akatuma kuti remazana seisingapindurwi e-mail, kuti zvakanaka murume / mukadzi iwe vakanga nokungotaura kuti zvakazoonekwa kuti kuroorwa, kuti mumwe iwe anakidzwa yakanyangarika pasina shoko uye munhu iwe akasangana svondo rapera kunge Hamubvumirwi mufananidzo kuti aiva makore anenge gumi okuberekwa nokuti haana kutarira chinhu chakadai munyama! Zvinogona tsvarakadenga kunondirwadza.
Hazvina kuti iwe zvinorevei kuva snobby, uye chokwadi chiri zvinogona sokuti munhu wose ukasangana paIndaneti iri kana kutamba mitambo, kutsvaka pabonde, kutsamwa ane Chip pafudzi avo pamusoro Eks, kwave yakarohwa nevanhu dzakashata rutanda uye ipapo Photo-dzavaienda mifananidzo yavo kuvaita kutarira akafanana muenzaniso kana ivo chete pachena nzungu! Kana kuti zvinoita utsinye haina kusikirwa, uye kuti zviri zvechokwadi sei kunzwa dzimwe nguva munyika paIndaneti kufambidzana. Kunyanya kana uchimuka jaded! Zvinosuruvarisa zvose izvi zvinogona kuita kuti unzwe kuneta, mwoyo varukutika. Mune dzimwe nguva kunyange uve nomubvunzo kana pane munhu ikoko newe!
Akaipisisa nyaya ndakaziva vanhu rokukanda munyika tauro zvakakwana, vachizivisa kuti kudanana paIndaneti haashandi, kana kuti zviri chete weirdos, kana chero shanduro nyaya ukaudza pachako. Tarirai Handirevi hazvishandi unonetsekerei paunoratidza kuwana mumwe mwoyo pashure perimwe, Zvisinei chii anogona kuita zvose musiyano pano duku kuchinja maonero – zvishoma 'tweak' kuti izvo kuburikidza rwamakandida kutarira paIndaneti kufambidzana.
Chii unofanira kurangarira pano ndechokuti kudanana paIndaneti dzakazonaka vako 'chipfuro musika', zvichireva kuti anokura zvikuru kupfuura angadai shure apo kufambidzana nomumwe kushandiswa kuitika pakati chete varume uye vakadzi kubva yomunharaunda yako Nharaunda. Uye ichi zvinoreva zvauri kusangana mhando vanhu vose vakasiyana. Havasi vose vari kuenda kuva vanhu vorudzii vako, uye hauzombozivi nguva dzose kuva yavo kana. Izvi zvinoshandawo kwauri pasinei anoshamisa muri uye sei zvakawanda hove muve. Munyika yose paIndaneti kufambidzana hazvina mutsauko zvikuru, pane chete mumwe uwandu 'nehasha uye koromoka'. Uye zvimwe mumwe 'vhoriyamu' vanhu ungangoita kusangana usati chaizvoizvo kusangana 'munhu', (kana muri rombo chaizvo). Uye yeuka chii hwomunhu marara ndiyo fuma womumwe. Dambudziko rinouya kana isu kutora wose chinhu pachedu.
Rimwe chinhu kuyeuka ndechokuti pataigara kudanana yekare zvechinyakare nzira, kureva musangano vanhu chiso nechiso, tingadai kazhinji tinoziva zvishoma pamusoro pavo kutanga, kunyange dai chete zvavari chaizvo kutarira akafanana muupenyu chaihwo. Zvisinei vane paIndaneti kudanana imi regai, saka imi muri kuenda naJessica mijenya vanhu kuti hamaizopa vakasarudzwa kufambidzana dai wakasangana navo munhu. Kunyange kuverenga Profiles hakuzofadzi kukupa pfungwa zvikuru, nokuti pashure zvose, vanhu kupa divi ravo chete akanakisisa kwavo Profile. Ngatitorei kuva vakatendeseka, hazvingadaro kuti munhu achida kunyora 'nyenaira, udyire narcissist pamwe halitosis uye zvishoma ikaramba ichiserera bvudzi anotsvaka mukadzi zvakanaka kuti kubika kunodya zvinenge yake '.
Saka zviri ndima nokuda kosi kuti uchava nazvo vamwe vanhu kuti imi rwaizoda kudzivisa sezvakaita denda. Uye vamwe muri usingamudi. Vamwe haangavi kufarira mamuri. Vamwe vachange sokuti kufarira uye ipapo hwanyangarika. Kana unogona kubvuma kuti zvose izvi chikamu uye nhuri chete paIndaneti kudanana ipapo iwe anova zvizhinji nani. Kuti nzira unogona kungoti kunyemwerera, kuseka iwe uti 'NEXT'. Zvadaro kuwana kodzero shure pamusoro bhiza.
Regai kuwana mwoyo. Ita ichi mumwe tweak shoma nemafungiro ako pamusoro paIndaneti kufambidzana, uye ipapo kubuda imomo uye vamwe kunakidzwa kuwadzana mijenya vanhu vakasiyana. tauriranai, nerudo, kuenda vamwe misi, ufare, uye ndiani anoziva, zvichida vako 'munhu' rinongova kumativi rinotevera pakona.